I-Bay leaf ye-type 2 yesifo sikashukela
I-diabetes mellitus type 2 - i-endocrine pathology, eyenziwa ngenxa yokunciphisa ukuzwela kwezicubu zomzimba kuya kwi-insulin, ngakho-ke ukuphuza kakhulu kwe-glucose uptake. Kulezi ziguli ezine-type 2 yesifo sikashukela, kunezinga legazi lokukhuphuka kwegazi, kanye nezibonakaliso ezilandelayo zomtholampilo: ukoma ngokweqile, ukuvuthwa okuvamile, isikhumba esomile, amehlo amancane, njll.
Ukwelashwa kwalesi sifo kubandakanya ukunamathela ngokuqinile ekudleni, ukuzivocavoca okulinganiselayo, ukusetshenziswa kwemithi yokunciphisa ushukela, ukwelashwa kwe-insulin kungadingeka futhi. Izindlela eziyisisekelo ezinemvume kadokotela zingase zenziwe ngezinye izindlela zokwelashwa, okufaka isandla ekuthuthukiseni isimo sesiguli futhi kuvimbele ukuthuthukiswa kwezinkinga. Ngakho, imiphumela emihle ibonisa ukusetshenziswa kwamaqabunga e-bay kuhlobo lwesifo sikashukela soluhlobo lwe-2.
Izakhiwo zokwelapha zeqabunga eliyi-diabetes mellitus
Iqabunga le-bay, elisetshenziswe kabanzi ekuphekeni, linamakhemikhali amaningi ayigugu futhi awusizo ekubunjweni kwalo:
ama-acid (i-valerian, i-kapron, njll);
amavithamini A, C, PP, B;
ama-macro- kanye nama-microelements (calcium, magnesium, iron, zinc, phosphorus, njll);
Ukulungiselela okusekelwe kule spice kunomphumela omuhle ekusebenzeni kweziningi nezinhlelo eziningi, kunomthelela ekuqiniseni izivikelo zomzimba zomzimba, ukususa ubuthi obuvela kuwo. Kulezi ziguli ezine-type 2 zesifo sikashukela, iqabunga le-laurel liyoba nemiphumela emihle elandelayo:
ukujwayela kwezinga legazi ngegazi ngenxa yokunciphisa ukumuncwa kwe-carbohydrate;
ukuthuthukisa ukusebenza kwama-pancreas aphethwe ukukhiqizwa kwe-insulini;
ukusheshisa ukuphulukiswa kwesilonda, ukuvimbela isilonda esiswini ngenxa yokuphulukiswa kwesilonda, isenzo sokulwa nesibindi, isenzo se-astringent;
Indlela yokuphuza amaqabunga e-bay nesifo sikashukela?
Ukuze ulungise imithi, ungasebenzisa kokubili amaqabunga amasha nama-laurel omisiwe. Into eyinhloko ukuthi bangabanemigomo ephezulu, enkulu, eluhlaza, ngaphandle komonakalo, ama-petioles amaqabunga, i-plaque. Ngokuvame ukwanda kwesifo sikashukela kunconywa ukumnika okweqabunga lwe-bay (amanzi tincture), kanye ne-decoction. Nazi izindlela zokulungiselela.
I-recipe ye-laurel leaf leaf tincture kusuka kusifo sikashukela
amaqabunga e-bay - ama-10-15 ama-pcs .;
Izinto eziwusizo ezifakwa efasmosini noma esinye isitsha esinesivalo, uthele amanzi abilayo, eseduze. Phezulu ngethawula elifudumele bese ushiya ukuze ume amahora angu-4. Thatha ikhambi nsuku zonke ngesigamu sehora ngaphambi kokudla kuka 100-150 ml. Inkambo yokwelashwa ivela ezinsukwini ezingu-14 kuya kwezingu-21, emva kwalokho ukuphumula kokwelashwa kuyadingeka cishe inyanga.
Iresiphi ye-decoction yeqabunga le-bay elivela kusifo sikashukela
amaqabunga e-bay - izingcezu ezingu-15-20;
Beka izinto eziluhlaza epanini elingaphansi koqweqwe lwawo, uthele amanzi abandayo bese ubeka ipuleti. Emva kokubilisa, ukunciphisa ukushisa, ukumboza ngesembozo bese ubilisa eminye imizuzu engu-20. Decoction ukupholisa, ukukhipha. Thatha inkambo yezinsuku ezintathu kuya kwemihlanu ngo-150-200 ml ngesigamu sehora ngaphambi kokuba udle, emva kwalokho ukuthi uthathe ikhefu kwenkambo yokwelapha yamaviki amabili.
Uma usebenzisa izidakamizwa kusuka eqenjini le-bay, kufanele njalo uqaphe amazinga egazi legazi.
Ukuqhathaniswa kwe-leaf leaf application kuhlobo lwesifo sikashukela 2
Iqabunga le-bay kufanele lingasetshenziselwa izinyathelo zokwelapha ngohlobo lwe-2 lwesifo sikashukela esilandelayo kumacala alandelayo:
isifo sikashukela sezinga elibi;
izifo ezinzima zezinso, isibindi, inhliziyo;
ukugcoba kwegazi okubi;
I-ginger, uju, i-lemon yokuzivikela
Amafutha axotshiwe - izakhiwo eziwusizo kanye nokuphikisana
I-Aloe Vera ijusi ebusweni
Yini ewusiza inja?
Ukwelashwa kwe-psoriasis celandine
I-Sea buckthorn - izindawo zokwelapha kanye nokuphikisana
Ukwelashwa komhlonyane ngama-parasites
Ngokuvamile konke ukugqoka usawoti
I-Beaver jet - uhlelo lokusebenza
Izinsipho eziphansi ze-Heel
I-Visa eya eMexico yamaRussia
Indodana yomlingisi uNicolas Cage yayisenkingeni enkulu!
Ungavala kanjani amapayipi endlini yangasese?
Kate Middleton noPrince William baya eCanada: usuku lwesibili
Indlela yokuvula isiteshi semali?
Ukuqhaqhazela ubuso ngobuso be-nitrogen
Izithelo eziwusizo kakhulu
Ngifaka kanjani i-friji?
Inhlanzi namaPisces - ukuhambisana kuwo wonke amazinga okuphila
Ungakhetha kanjani i-skateboard yengane engu-9?
Isikhungo Sesirafu "Langata"
Izambatho ze-Ladies 'elite